कस्ले किन्ला १ लाखको खुकुरी , बडिगार्ड महोत्सवमा खुकुरी आकर्षण – Enepal Khabar
कस्ले किन्ला १ लाखको खुकुरी , बडिगार्ड महोत्सवमा खुकुरी आकर्षण
बागलुङ, ४ मङ्सिर । बागलुङ को पश्चिम भाग बडिगार्ड गाउपालिकामा सँचालित बडिगार्ड महोत्सव तथा नागी मेलामा एउटा ठुलो खुकुरी राखिएको छ । खुकरीको मुल्य कति छ? पुरै एक लाख रुपैय । तौल ३५ किलो रहेको उक्त खुकुरीलाइ लाइ बनाएका हुन् हाम्रै नेपाली नागरिक विशेष गरेर आरान गर्ने विश्वकर्माले ।
खुकुरी बनाउने मनबहादुर विश्वकर्मा र उनले बनाएको खुकुरी अहिले महोत्सव मात्र नभएर देशविदेशमा समेत चर्चामा छ । उनलाइ अहिले उक्त खुकुरीको बारेमा जानकारी दिँदैमा फुर्सद छैन । अहिले बडिगाड महोत्सव छिर्नेहरूको ध्यान खुकुरीले तानेको आयोजकले बतायो ।
यसरी बन्यो खुकुरी
मेलाको मुख्य आकर्षण बनेको खुकुरी देख्दा हेर्दा जति वाह र आनन्द लागेको छ। त्यो खुुकुरी बनाउदाको पिडा भने निकै फरक छ ।
३५?३६ केजीको फलामलाइ आगोमा हालेर पिट्नु र खुकुरी बनाउनु कुरा सामान्य होइन । उक्त खकुरी बनाउन८ दिन लागेको थियो । कालीगड विश्वकर्माका लामोसमयदेखी आरान पेशामा कालीगडको रुपमा काम गर्दै आएको बताए ।
सात वर्षदेखि बुर्तिवाङ बजारमा ‘बुर्तिवाङ आरन सेवा’ व्यवस्थितरुपमा चलाउदै आएका विकलाइ यस्ता मेला तथा महोत्सवमा जाने बारे पनि ज्ञान छ । उनले मेलामहोत्सव गएर लाख जति कमाइ गरेको अनुभव बटुलेका छन् । जाँदा करिव रू एक लाखसम्म कमाइ हुन्छ ।” छिमेकी जिल्ला गुल्मी, पाल्पा लगायत स्थानमा हुने मेला, महोत्सवमा पनि पुग्ने गर्छन् ।
। ”उनले आफु सँगै आफ्नी श्रीमतीलाइ पनि मेला महोत्सवमा लिए जान्छन् भने । आफ्नो अलवा अन्य ६ जना भन्दा बढि लाइ रोजगारी पनि दिएका छन् ।
पुख्र्यौली घर ढोरपाटन नगरपालिका–६ अधिकारीचौर भएपनि अहिले लामोसमयदेखि त्यसै ठाउँमा बसेका विश्वकर्माका
बुवाले समेत अझै आारान पेशा गर्दै आएका छन् ।
कमाइ कति छत ?
फलाम र तामाको काम गर्नेलाइ पहिला निकै हेला गर्ने, सानो जाति मान्ने जातपात प्रथा सँगै पछिल्लो समय यो पेशलाइ विश्वकर्मा समुदायका युवा रनयाँ पिढीले छाड्दै आएका छन् । तर अहिले यहि पेशालाइ राम्रो व्यवस्थित र समयअन्सार परिवर्तन गर्ने हो भने नाम सँगै दाम पनि राम्रो हुने उनको भनाइ थियो । अहिले मासिक रुपमा सबै खर्च कटाएर १ लाख जति कामइ हुन्छ । अनि अझै यसरी आफ्नो सिपलाइ दे्श विदेशमा समेत प्रचार हुँदा नाम आउँदा मन फुरुङ्ग हुन्छ उनको भनाइ छ ।
‘ महोत्सव र खुकुरी
खुकुरी गोरखालीको सान पनि हो । प्राय खुकुरीको भरमा युद्धामा पनि नेपालीले अग्रेजलाइ हराएका थिए । गोरखाली खुकुरी सँसारभर परिचित छ । त्यसैले नेपाली हुने हो भने प्रत्येक नेपालीको घरमा एउटचा गोरखाली खुकुरी हुनुपर्छ ।हाम्रो परिचय पनि हो त्यो । बडिगाड गाउँपालिकामा पहिलोपटक आयोजना गरिएको ‘बडिगाड महोत्सव तथा पौँदी न्वागी मेला’मा घरेलु तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिदा महोत्सवको रौनक अझै थपिएका भनाइ छ । मेलामा पुगेका एकजना पत्रकारले भने , उक्त महोत्सवमा प्राय नेपाली लोकल उत्पादन भएकोमा खुसी व्यक्त गरे । यसले आन्तरिक उत्पादनलाइ अझै विस्तार गर्न सघाउ पुराउने विश्वास व्यक्त गरे ।
९ गते सम्म चल्ने महौत्सवलाइ गत शनिबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले उद्घाटन गरेका थिए ।
४ मंसिर २०७५, मंगलवार १०:१८ मा प्रकाशित